နေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ & ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Jan.29, 2020 မှ ISPO မြူးနစ် Jan.26 ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ C6.431-6 မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
နောက်ကျော & လည်ပင်းပံ့ပိုးမှု
ယောဂလုပ်ကွက် & သိုင်းကြိုး
ယောဂကို Socks, အိတ် & အခြားသူများ
လေ့ကငျြ့ခနျး & Fitness
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲပါဝါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D အသင်းကိုကြည့်, ငါတို့ကအမြဲ R & D သို့ 10% အသားတင်အမြတ်ထား, ငါတို့စျေးကွက်သို့ကြည့်မျှော်နှင့်စိတ်ကူးတွေအများကြီးထုတ်ပေးသောစျေးကွက်အလားအလာ, ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနေကြတယ်, ငါတို့သည်အချို့သောန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုအထိကောက် ကမ္ဘာကြီးကို။ သဘောတူညီခဲ့စိတ်ကူးဒီဇိုင်းပုံကြမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အချို့ကိုအဖန်ဖန် communicate ...... နောက်ဆုံးတွင်ပုံဆွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D အဖွဲ့ကထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်, နက်ဖြန်နောက်ဆုံးနမူနာစေရန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုအခါငါတို့သည်နောက်လာမည့် step- "ထုတ်လုပ်ခြင်း" ကိုသွားပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းလူတစ်ဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့အားလုံးအသေးစိတ်ပြန်လည်ပါလိမ့်မယ်, Ningbo အတွက်ပေးသောထုတ်လုပ်ခြင်း Hula ကွင်း, လည်ပင်းနှင့် Back ကိုထောက်ခံမှုထုတ်ကုန်များ, Acupressure ထုတ်ကုန်များနှင့်တှေးတောဆငျခွကုန်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံများရှိသည်။ ထို့နောက်စက်ရုံများ PP နမူနာအတည်ပြုခဲ့သည်သောအခါ Pre-ထုတ်လုပ်မှုနမူနာစက်ရုံအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ပါလိမ့်မည်စေမည်။ "အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု" - စက်ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, Go ကိုလာမယ့်ခြေလှမ်းအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အတွက် ISO9001 အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ 2008 အရသိရသည်သောကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏3parts- ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသို့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အကွဲပြားမှု (ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းဂိုဒေါင်သို့သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီသွားမီစစ်ဆေးခြင်း), အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးကာလအတွင်းထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ISO9001 အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပေါ်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်, နမူနာစစ်ဆေးခြင်း AQL (လက်ခံအရည်အသွေးကန့်သတ်) 2.5 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ QC တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်စစ်ဆေးခံရအစီရင်ခံစာများစေမည်။ ဖောက်သည်ကတော့စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာများစစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်အတည်ပြုခဲ့သည်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ကုန်ပစ္စည်းများထွက်တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးစျေးကွက်လိုအပ်ချက် 'ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကနဲ့ R & D ကိုအဖွဲ့သည်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံး clients များဖြည့်ဆည်းဖို့ဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်စေရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြတယ်, အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်စျေးကွက်အတွက်လူကြိုက်များတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေ' 'နောက်ဆုံး clients များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကအမြဲတမ်းထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝတ်ပြုဖို့မိခင်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဝိညာဉျကိုအာရုံစိုက်နေကြတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကနဲ့ R & D ကိုအသင်းအနေဖြင့်ဆန်းသစ်သောစိတ်ကူးနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုလိုက်နာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အသစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်နာမည်ကျော်ထုတ်ကုန်တွန်းပါလိမ့်မယ် ။ ကျနော်တို့အကောင်းတစ်ဦးဆက်သွယ်ရေးတဝက်အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အသစ်တခုအမိန့်များစတင်အဖြစ်တိုင်းပေးပို့ကြည့်ရှုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်တင်ပို့ပြီးနောက်ဖောက်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ကုန်ပစ္စည်းများတက်ကောက်ဖို့အဘို့, ကျနော်တို့လိုအပ်လျှင်ကုန်ပစ္စည်းများကောက်ဖို့ဘယ်လိုဖောက်သည်ကူညီပေးခြင်း, ရှိသမျှစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ရက်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ဖောက်သည်ရန် "ကျေနပ်ပုံစံ" ကိုပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အပြန်အလှန်တန်းတူညီမျှမှု, အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိပေါ်မှာငါတို့အခြေခံမူအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် "ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်ပထမဦးဆုံးစာချုပ်ဝိညာဉ်အကြွေး" ကိုကြည့်။
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် "နေ" 2005 ခုနှစ်မှာဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်မူအရတည်ဆောက်ခဲ့ "နေ" သဘာဝ (အော်ဂဲနစ်) အပေါ်အခြေခံ, Eco ဖော်ရွေနှင့်ကျန်းမာရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် "နေ" သဘာဝ, ဖော်ရွေနှင့်ကျန်းမာရေး Eco ကနေပထမဦးဆုံးအက္ခရာကြာပါသည်။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့်သဘာဝ, Eco Friendly and ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်စေမွှုပျနှံ။
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် "SCMO" ကိုလည်းကုမ္ပဏီအမည်ကိုဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာ "ငါးဒြပ်စင်၏သီအိုရီ" နှင့် "Fengshui" ၏တရုတ်ဒဿနိကဗေဒနှင့်အညီ, တရုတျထဲတွင် SCMO "xun Mu" ဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါစကားလုံးတရုတျထဲတွင် "xun" ဟုသူမကသွားပါနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နေရာတိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးမစ်ရှင်အတူငါတို့မစ်ရှင်အကူအညီနဲ့လူတိုင်းဖို့ပိုကျန်းမာသန်စွမ်းသည်ဟူသောစကားလုံးတရုတျထဲတွင် "Mu" ကျနော်တို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေနှင့်နေ့ရက်တိုင်း knowhow သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါ SCMO (Xunmu) ကြှနျုပျတို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကပိုကျန်းမာသန်စွမ်းကူညီရန်နေ့ရက်တိုင်း knowhow ။
သိပ္ပံနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာ့အရင်ကထက်ပစ္စည်းလယ်ပြင်၌ သာ. ရောင်စုံဖြစ်လာခဲ့သည်, အဆိုပါအမှုအရာများစွာကိုနယ်ပယ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားတယ်, လူတွေအများစုဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြမ်းကနေအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးရတယ်, သို့သော်, ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြမ်းနှင့်စိတ်ကို & ဝိညာဉျကိုနှစ်ဖက်အကြားအချိုးမညီမျှမှုပါပဲ။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် BESELF ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြမ်းနှင့်စိတ်ကို & ဝိညာဉျကိုနှစ်ဖက်အကြားချိန်ခွင်လျှာအရအကူအညီလူတွေကိုဆက်စပ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှည်လျားသော time.A အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောရိုးများအတွက်အိတ်ပြဿနာတတ်၏အဘို့ထိုင်ဖို့လူရဲ့အလုပ်လုပ်မူအကငျြ့အများစုပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်အိုင်တီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, နှင့်အတူ, ကျနော်တို့မကြာခဏအနိမ့်ပြန်နာကျင်မှုနှင့်လည်ပင်းနာကျင်မှုခံစားရဤနာတာရှည်နာကျင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုခြိမ်းခြောက်, ကျနော်တို့အမှတ်တံဆိပ် "မှော်ပြန်ထောက်ခံမှု" 2011.Now အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အမှတ်တံဆိပ် "မှော်ပြန်ထောက်ခံမှု" တရုတ်, အမေရိကန်နှင့်အီးယူအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဒါကသူတို့၏အခြေအနေများတိုးတက်စေရန်အကူအညီလူတွေကိုမွှုပျနှံ
"Eco ဖော်ရွေ" ၏အယူအဆထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ကုန်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခညျြအနှောတစ်ရပ်တည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံမူဖြစ်ပါတယ်။ 2010 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးလေးနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခဲ့သည့်အစားအသောက်များတွင်ဆေးပြားရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ငါတို့လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ hula ကွင်းတွန်းအားပေးရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါသည်သဘောပေါက်, ပြည်သူ့အမြဲငါတို့သည်ငါတို့၏ hula ကွင်းများအတွက်အမှတ်တံဆိပ် "အလေးချိန်ကွင်း" built ဒီတော့ကျနော်တို့့ကနေတစ်ခုခုတယ် "ဟုဆုံးရှုံးအလေးချိန်, အသုံးပြုမှု hula ကွင်း" ဟုပြောသည် အလေးချိန်ကွင်းတရုတ်, အမေရိကန်နှင့်အီးယူအတွက်မှတ်ပုံတင်ငြ
သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲပါဝါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D အသင်းကိုကြည့်ကျနော်တို့ကအမြဲ R & D သို့ 10% အသားတင်အမြတ် ထား. , ကျနော်တို့ဈေးကွက်သို့ကြည့်မျှော်နှင့်စိတ်ကူးတွေအများကြီးထုတ်ပေးဘယ်စျေးကွက်လမ်းကြောင်းသစ်, ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနေကြတယ်, ကျနော်တို့အချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုအထိကောက် အဆိုပါ world.Some သဘောတူညီခဲ့စိတ်ကူးဒီဇိုင်းပုံကြမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်န်းကျင်, အဖန်ဖန် communicate ...... , နောက်ဆုံးတွင်ပုံဆွဲနောက်တစ်နေ့တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းနမူနာစေရန်ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D အဖွဲ့ကထုတ်ပေးသည်ထိုအခါမှသာလာမည့် step- ကိုသွား "ထုတ်လုပ်ခြင်း"
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းလူတစ်ဦးစက်ရုံများကြလိမ့်မည်ကိုထိုနောက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့အားလုံးအသေးစိတ်ပြန်လည်ပါလိမ့်မယ်, Ningbo အတွက်ပေးသောထုတ်လုပ်ခြင်း Hula ကွင်း, လည်ပင်းနှင့် Back ကိုထောက်ခံမှုထုတ်ကုန်များ, Acupressure ထုတ်ကုန်များနှင့်တှေးတောဆငျခွကုန်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံများရှိ Pre-ထုတ်လုပ်မှုနမူနာစက်ရုံလုပ် PP နမူနာအတည်ပြုခဲ့သည်သောအခါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ပါလိမ့်မည်။ "အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု" - စက်ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, Go ကိုလာမယ့်ခြေလှမ်းအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အတွက် ISO9001 အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ 2008 အရသိရသည်သောကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်
သင့်ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်များ & စျေးကွက်ဘာတွေလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန် hula ကွင်း, acupressure ဖျာ, lumbar ကုထုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်တရားအားထုတ်အုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့အတွက် 10 နှစ် '' အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအဓိကအားဖြင့်စူပါမားကတ်မန်နေဂျာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးလယ်ပြင်၌ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝယ်ယူနဲ့ Amazon ဈေးရောင်းနေသောဥရောပကနေ clients များ, မြောက်အမေရိက, Oceania နှင့်တောင်ကိုရီးယားကယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
MOQ သင်၌စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, သင့်စိတ်ကြိုက်အသေးစိတ်ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်များအတွက်အရောင်နှုန်း 50-100pcs / လုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကိုထောကျပံ့ရနျကြှနျုပျတို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ကြင်နာထုပ်ပိုး၏အဘယျပူဇော် & Can သလဲ?
စံထုပ်ပိုးတံဆိပ် + ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ + အရောင်သေတ္တာ (သို့မဟုတ်မေးလ် box ကို) + စက္ဏူထူသေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာထုပ်ပိုးအကြောင်းကိုအများအပြား options နဲ့အသစ်ကအတွေးအခေါ်များပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတစ် catalog ပေးနိုငျပါသလော
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သီးခြားစီအဓိကထုတ်ကုန်များ၏ကတ်တလောက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့က e-mail ကိုသို့မဟုတ်လူမှုရေး apps များအားဖြင့်သင်တို့ကို PDF သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံပုံစံအတွက်ကတ်တလောက်ပို့ပေးရန်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ instrucion ယင်း၏ function ကို၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူလက်စွဲ, အသုံးပြုမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်လုပ်ရန်နှင့်မလုပ်ရန်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုရှေးခယျြခံရဖို့အချို့အရောင်များရှိသည်နှင့်သင် options များပြသပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အသစ်တစ်ခုအရောင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို Pantone အရေအတွက်ကပြောပြသို့မဟုတ်ကိုအရောင်နမူနာပေးပို့ပါ။
ကျနော်တို့သင်ကုန်တင်နှင့်အပိုဆောင်းနမူနာများအတွက်ပေးဆောင်သင့်ပါတယ်နေချိန်မှာသင်တို့အဘို့တယောက်အခမဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးနမူနာများကိုဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။ တစ်ဦးအပိုဆောင်းကြေးကြောင့်ကျနော်တို့ပုံနှိပ်ခြင်း၏ပုံစံဘုတ်အဖွဲ့စေရန်ရှိသည်မှတစ်စိတ်ကြိုက်နမူနာများအတွက်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ သငျသညျကို PayPal ဒါမှမဟုတ်တရုတ်သီးသန့် AliPay နှင့် WeChatPay မှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်ပါ။ အဆိုပါပေးပို့အချိန်နှင့်အမျှအောက်ကစာရွက်ရှာတွေ့ပါ။
မြောက်အမေရိက2~ 3days
ဥရောပ3~ 5days
အာရှတိုက်2~ 3days
အာဖရိကတိုက်5~ 7days
ငါတို့သည်သင်တို့ပြုလုပ်ကြပါဘူး, ဘာဝနာခေါငျးအုံးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းတစ် GOTS ရှာနေလဲ?
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာဝနာခေါငျးအုံးအဆိုပါ GOTS လက်မှတ်လွန်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် nontoxic ပစ္စည်းအားဖြင့်လုပ်နေကြသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်လက်မှတ်များသိရှိလိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရွက်ရှာတွေ့ပါ။
သတင်းအချက်အလက် အခွင့်အာဏာလက်မှတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံ GOTS, BSCI, ISO9000
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် hula ကွင်း အီး, လက်လှမ်းမီမှု, ROHS, AZO, EN71,6P ဟုတ်ကဲ့
acupressure ဖျာ အီး, ROHS, EN957, လက်လှမ်းမီ ဟုတ်ကဲ့
မှော်ပြန်ထောက်ခံမှု အီး ဟုတ်ကဲ့
ဘာဝနာခေါငျးအုံး ROHS, EN71, GOTS
ကျနော်တို့ hula ကွင်းများနှင့်သိသိသာသာတဦးတည်း 40HQ ကွန်တိန်နာ 15 ရက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် shortens ရာ acupressure ဖျာဘို့ငါတို့အော်တိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်း updated ပါပြီ။ အခြားထုတ်ကုန်များများအတွက်စံထုတ်လုပ်မှုခဲအချိန် 20 အကြောင်းကိုရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
destination port ကို ပင်လယ်နားမှာက Delivery အချိန်
မြောက်အမေရိက အသက် 30 ~ 50days
ဥရောပ ရက် 30
အာရှတိုက်7~ 15days
အာဖရိကတိုက် 20 ~ 40days
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း T / T သိုက်အဖြစ် 30%, B / L မိတ္တူဆန့်ကျင် 70% ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဖောက်သည်မြင့်မားသောဖြေရှင်းချက်ကြော်ငြာဓါတ်ပုံ, မော်ဒယ်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်သည် supporting န်ဆောင်မှုများကိုကူညီပေးသည်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ photostudio နှင့်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အသည်းအသန်ဓာတ်ပုံအသင်းရှိသည်။
နေ (NINGBO) စက်မှု & TRADE CO ။ , LTD မှ။
ရုံး: 1502, Ningshing အဆောက်အအုံ, 666 Jiangnan RD, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo, တရုတ်
စက်ရုံ: No.13, Xinheng ရီ RD, ပုဂ္ဂလိကစက်မှုဇုန်, Jiangbei ခရိုင်, Ningbo, တရုတ်
© Copyright - 2009-2020: အားလုံးအခွင့်အရေး။